Friday, October 16, 2020 - 14:09
(Manchester) 16 Okt 2020. Tababaraha reer Norway iyo kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa xaqiijiyay inuu kalsooni buuxda ku qabo sii joogitaanka Paul Poga ee Red Devils ilaa dhamaadka qandaraaskiisa ugu yaraan.
Magaca Paul Pogba ayaa lala xiriiriyay u dhaqaaqistiisa kooxda Real Madrid, kaddib markii uu laacibka reer France sheegay in ka badan hal jeer riyadiisa ah inuu ka ciyaaro Los Blancos maalin uun.
Sida laga soo xigtay shabakada “Goal” Tababaraha reer Norway iyo kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Paul Pogba waa ciyaaryahan u ciyaara kooxda Manchester United laba sano oo kale”.
“Waan hubaa in Paul Pogba uu kaliya diirada saarayo sidii uu noogu sameyn lahaa waxa ugu fiican”.
”Waxaan ku kalsoonahay in aan ka faa’iidaysan doono Paul Pogba labada sano ee soo socota” ayuu yiri tababare Ole Gunnar Solskjær.Gool FM.
Friday, October 16, 2020 - 13:39
“Waxaan jeclaan lahaa inaan si toos ah u tilmaamo isku ekaanshaha weyn ee u dhexeeya Zanetti iyo James Milner, kaasoo isla shaqadaas oo kale ka qabtay kooxda Liverpool”.Gool FM.
Friday, October 16, 2020 - 10:07
“Waxaan sidaas ku dareemay Leipzig markii aan la ciyaareynay Tottenham, waxay ahayd dareen waali ah, wuxuu ahaa dareen ka duwan kan Bundesliga”.Gool FM.
Friday, October 16, 2020 - 09:35
Manchester City ayaa kulamadii la soo dhaafay waxay dhibaato weyn ka heysatay dhanka gooldhalinta maadaama ay dhaawac kaga maqnaayeen xiddigaheeda Sergio Aguero iyo Gabriel Jesus, Pep Guardiola ayaana isku dayay dhowr magacyo inuu booskaas ku biixiyo sida Phil Foden iyo Raheem Sterling laakiin kuma guuleysan.Gool FM.
(London) 16 Okt 2020. Halyeeyga kooxda Arsenal ee Martin Keown ayaa xaqiijiyay in jamaahiirta naadiga ay dariska yihiin ee Tottenham Hotspur aysan dulqaad yeelan doonin waqti dheer si ay u arkaan hal abuurka Gareth Bale.
Kooxda Tottenham ayaa si rasmi ah u shaacisay inay soo ceshatay xiddigeedii hore reer Weles ee Gareth Bale, kaasoo kaga soo dhaqaaqay naadiga Real Madrid, heshiis hal xilli ciyaareed oo amaah ah.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Martin Keown, waxaana uu yiri:
“Bale waxaa looga soo dhabeeyay qalbi furan Tottenham Hotspur, waa xiddigii kaga dhaqaaay kooxda si uu kula soo guuleysto wax walba Real Madrid”.
“Laakiin tani waa xilligii bisha malabka, waxaanan hubaa in Gareth Bale uu ogyahay in taageerayaasha ay wax gaar ah kaga sugi doonaan garoonka dhexdiisa”.
“Waxaan dareemay inaan dhibtoonayo inta lagu gudajiray kulamadii ugu horeeyay, marka Bale waa inuu taxaddaraa”.
Wargeyska ayaa wuxuu tilmaamay in Bale uu la soo dhibtooday dhaawacyo sanadihii la soo dhaafay, Martin Keown ayaana carabka ku adkeeyay in waaxda farsamada ee Spurs ay tahay inay tixgeliso arintaas.
“Waan hubaa in Jose Mourinho uu ka fiirsan doono maareynta daqiiqadaha la siiyay Gareth Bale, shaqaalaha caafimaadka ee kooxda ayaa sidoo kale arinta wax ka qaban doona”.Gool FM.
Thursday, October 15, 2020 - 16:27
“Xaaladda kooxda waa mid wanaagsan, dabcan waan ka murugoonaynaa guuldarrada, laakiin waa inaan jawaab ka bixino kulanka soo aaddan.”Gool FM.
(Turin) 15 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay sanadka 2021-ka la wareegto bartilaameedkii Arsenal ee Houssem Aouar.
Warsidaha Calcio Mercato ayaa warinaya in Kooxda Juventus ay dib u soo nooleyn doonto sanadka 2021-ka xiisihii ay u qabtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lyon Houssem Aouar.
22-sano jirkaan ayaa la warinayey inuu u dhaqaaqayo Kooxda Arsenal xagaaga oo dhan, laakiin Bianconeri ayaa sidoo kale xiriir la sameysay wakiilkiisa maalmihii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga.
Inkastoo Juve aysan awoodin inay heshiis la gaarto laacibkan ka hor maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga kaasoo dhowaan xirmay ayaa hadda waxa ay qorsheynayaan inay dib u soo celiyaan raacdadooda markii suuqa kala iibsiga dib loo furo.Gool FM.
Thursday, October 15, 2020 - 15:53
(Yurub) 15 Okt 2020. Waxaa la shaaciyey liiska kama dambeysta ah ee 20-ka laacib ee ku tartami doona abaal-marinta Wiilka dahabiga ah ee Golden Boy 2020.
Sancho & Fati ayaa hoggaaminaya liiska xiddigaha u sharraxan abaal-marinta Golden Boy 2020, waxaana sidoo kale liiskan kama dambeysta ah ku soo baxay Haaland & Greenwood.
Wargeyska dalka Talyaaniga ka soo baxa ee Tuttosport ayaa bixinta abaal-marintan bilaabay sanadkii 2003, waxaana da’yarkii ugu horreeyay ee ku guuleystay uu ahaa xiddigii reer Holland ee Rafael Van Der Vaart.
Xiddigii ugu dambeeyey ee abaal-marintan ku guuleystana waxa uu ahaa da’yarka hadda ka tirsan kooxda Atletico Madrid ee Joao Felix.Haddaba halkaan hoose ka eeg liiska 20-ka laacib ee ku tartami doona abaal-marinta Golden Boy 2020:-
Vinícius Junior – Real MadridGool FM.
(Madrid) 15 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid eek a dhisan caasimadda Spain ayaa la soo warinayaa inay kaliya heshiis kordhin hal sano ah hordhigayso ciyaaryahankeeda Luka Modric.
Wargeyska Sport ayaa warinaya in Kooxda Real Madrid ay kaliya hal sano oo qandaraas kordhin ah u soo bandhigi doonta laacibkeeda khadka dhexe ee Luka Modric.
Xiddigan qibradda leh ee xulka qaranka Croatia ayaa haatan da’diisu tahay 35-sano jir, waxaana uu haatan ku dhow yahay inuu xirfaddiisa ciyaareed soo gabagabeeyo.
Los Blancos ayaana kaliya hordhigi doonta Modric sida warbixinta lagu shaaciyey qandaraas kordhin hal sano ah.Gool FM.
Thursday, October 15, 2020 - 10:07
“Laakiin bishaan, waxaan arkay isagoo si fiican u tababaranaya, waana hubaa inuu banaanka keeni doono awoodiisa, farxad badana siin doono kooxda”.Gool FM.
Dilalka qorsheysan ee Gaalkacyo oo baaritaan lagu hayo.
Thursday, October 15, 2020 - 09:04
Booliska magaalada Gaalkacyo ee dhanka maamulka Puntland oo fuliyay howlgallo ay kusoo qabqabtay, dad lagu tuhmayo inay dilal geysteen magaaladaasi ayaa sheegay inay muddo sadax bilood ah ku ballan qaadayaan, in Gaalkacyo ay noqoto meel aan qofna lagu dilin.
Taliyaya qeybta booliska ee gobolka Mudug ee dhinaca Puntland Gaashaanle Muumin Cabdi Shire ayaa idaacadda VOAda u sheegay in dadka ay soo qab qabteen ay hayaan baaritaan, xilli goor hore ay kooxda Alshabaab sheegatay dilkii u dambeeyay dhowaan nin dhalinyaro ah loogu geystay magaaladaasi.
Wariyaha VOAda Cabdiwaaxid Maclin Isaaq ayaa waraysigan la yeeshay.
(Turin) 15 Okt 2020. Inkasta oo loo doortay xiddigii ugu fiicnaa horyaalka Italy xilli ciyaareedkii hore, hadana uma muuqato in ay Juventus doonayso in ay sii haysato xiddiga reer Argentine ee Paulo Dybala mustaqbalka fog.
Paulo Dybala ayaan u ciyaarin ilaa iyo haatan kooxdiisa Juventus sababo la xiriira dhaawicii soo gaaray xilli ciyaareedkii hore.
Xiddiga reer Argantina ma uusan cusbooneysiinin qandaraaska uu kula jiro kooxda Juventus ilaa iyo waqtigaan, halka wargeyska “CalcioMercato” oo xiganaya dhigiisa “Daily Mail” uu sheegay in Juventus aysan wax niyad ah u heynin inay fuliso codsiyada Dybala, taasoo la macno ah in lagu sii dhawaanayo ka tagitaankiisa magaalada Turin.
Wargeyska Talyaaniga ayaa sharxay in sababaha qaar ay ka dhigayaan in Juventus ay ku fikirto iibinta ciyaaryahanka, oo ay ugu horeyso in Pirlo uusan u arkin Dybala ciyaaryahan lagama maarmaan ah, gaar ahaan iyadoo ay adag tahay inuu la joogo Cristiano Ronaldo isla waqtigaas garoonka dhexdiisa, waxaana loo arkaa in booskaas uu ku haboon yahay xiddiga reer Sweden ee Dejan Kulusevski.
Sababta labaad ayaa ah dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay caabuqa Korona Fayras, maadaama kooxda ay ku fikireyso suurtagalnimada ay kaga heli karto dhaqaalo badan howlgalka ay ku iibineyso ciyaaryahanka.
Waxay intaas ku dartay in maamulka Bianconeri ay horay u dejiyeen qiimaha lagu iibinayo laacibka reer Argentina, maadaama ay codsadeen 80 million euros, lacagtaas oo laga yaabo inay ku riixdo kooxaha Manchester United iyo Tottenham inay mar kale u dhaqaaqaan si ay ula soo saxiixdaan Paulo Dybala oo ay u keenaan Premier League.Gool FM.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Chelsea ayaa loolan adag kala kulmi doonta saxiixa Håland, madaama Real Madrid ay muujisay xiisaha ay u qabto weeraryahanka reer Norway si ay u dhisto weerar adag.Gool FM.
Thursday, October 15, 2020 - 08:31
“Waxaad heysataa rikoorro badan si aad u jabiso, iyo calaamado badan oo aad ka tagi karto, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko Brazilian heer sare ah”.Gool FM.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo bandhigay asbuucaan nin 19 jir ah oo lagu mgacaabo Deeqow Caliyow Kuusoow, oo la sheegay inuu ka mid ahaa 4 nin oo weerar ku qaaddey bartimihii sanadkii tagay hotelka Cascaseey ee magaalada Kismaayo.
Ninkaasi oo dil lagu lagu xukumay ayaa maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Jubbaland ay sheegtay in baritaankiisa uu socdey muddo sanad ka badan ee uu dhaawac ahaa.
Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Kismayo kula xariirtey Col. Bashiir Xareed oo ah Garsooraha 1 Maxkamada Ciidamada Militariga ee Jubbaland.